Tue, Jul 14, 2020 at 3:53am
अमरगढी, १६ मङ्सिर डडेल्धुरामा एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ । एचआइभी सङ्क्रमित हुनेमध्ये बढीजसो कामको सिलसिला र रोजगारीका लागि भारत जानेमा बढी भएको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ । एचआइभी सङ्क्रमित १३६ जनामध्ये डडेल्धुरामा हालसम्म ९६ जनाले मात्रै नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन् । बाँकी सङ्क्रमितले पुनं कामका लागि अन्य स्थान वा भारत जाने–आउने क्रमले गर्दा नियमित औषधि सेवन नगरेको तथ्याङ्कले देखाएको..
एजेन्सी, मंसिर १६ पुदिनाले हामीले खाएको खानामात्र पचाउँदैन, पेटमा भएका विभिन्न रोगबाट मुक्ति दिन्छ । पुदिनाको अचार खाँदा जति मीठो हुन्छ, त्यतिनै स्वास्थ्यको लागि लाभदायी पनि मानिन्छ । यसले शरीरलाई शितलता प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न रोगहरुबाट बचाउँछ । पुदिनामा मेन्थोल, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन ए, कपर, आइरनजस्ता तत्व पाइन्छ । पुदिना खाँदा वान्तालाई पनि रोक्न सकिन्छ र पेटमा भरिएको ग्यासलाई पनि सहज तरिकाले निकाल्न..
एजेन्सी, १५ मङ्सिर । फल तथा सब्जी भिटामिन एवं माइक्रो न्युट्रियन्टको राम्रो स्रोत हो । यी तत्वको कमीले मुटु, मधुमेह र अन्य प्रकारका गैरसंक्रमक रोगलाई बढावा दिन्छ । रिपोर्टका अनुसार, विश्वका शीर्ष वैज्ञानिक संस्थाको अध्ययनमा फलफूल–सब्जीको सेवनमा भएको कमीलाई लिएर चिन्ता बढ्न थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) खानामा फलफूल र सब्जीको मात्रा ४०० ग्राम तय गरेको हो । ..
काठमाडौँ, १३ मङ्सिर मानिसहरुले आफ्नो स्वास्थ्यको निक्कै हेरचाह गर्नु पर्ने हुन्छ, र हामी पनि आफु स्वस्थ्य रहनको लागि अनेक प्रकारको उपायहरु अपनाउने गर्दछौ | स्वास्थ्य कायम राख्नका लागि तिलको ठूलो महत्व छ । तिलमा पाइने पुष्टिकारक तत्वले शरीरलाई चुस्तदुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ । तिलमा पाइने लेसिथिन दिमाग र आँखाका लागि लाभदायक हुन्छ । तिलमा पाइने सेसामोल नामक तत्वले डिएनएलाई परावैजनी किरणजन्य हानिबाट जोगाउँछ । तिलका..
चितवन, १३ मङ्सिर । चितवन मेडिकल कलेजले सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार बढी लिइएको रकम फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएको छ । कलेजले बिहीबार यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मङ्सिर १० गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा मेडिकल कलेजका सञ्चालकसहितको बैठकपछि भएका सहमति कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत बढी लिइएको शुल्क फिर्ता वा समायोजनको प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएको हो । कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक..
काठमाडौँ, १२ मङ्सिर अदुवाको सेवनले शरीरलाई तातो बनाउनुको साथै रुघा-खोकी, ज्वरो, घाँटी खस्खसाउने जस्ता समस्याहरुबाट मुक्ति प्रदान गर्छ । तर, कहिलेकाहीँ अदुवाको सेवन कुनै व्यक्तिको लागि ज्यान नै जाने कारण पनि हुनसक्छ । अदुवाको सेवन हरेकको लागि फाइदाजनक हुँदैन । त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरु छन् । जसलाई अदुवाको सेवन शरीरका लागि खतरनाक प्रमाणित हुन सक्छ । आज हामी त्यस्ता रोगहरुको बारेमा चर्चा गर्ने छौं,..
चितवन, १२ मङ्सिर । अष्टमहादान, दश महादान, पञ्चधेनुजस्तै आँखादानबाट पुण्य प्राप्ति हुने पुरोहितहरुले जनाएका छन् । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ चितवनअन्तर्गतको आँखा बैंक व्यवस्थापन समितिले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको पुरोहितहरुसँगको अन्तक्र्रियामा सहभागीले आँखादान गर्न जनचेतना जगाउने कार्यमा सहयोग पु¥याउने बताएका हुन् । सो अवसरमा पुरोहित समाज नेपालका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले आँखादानलाई सबै दानजस्तै नेत्र महादान सम्झेर जनचेतनामा जुट्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अष्टमहादान, दश..
काठमाडौँ, ११ मङ्सिर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालित केन्द्रीय अस्पतालको निरीक्षण तथा अवलोकन शुरुआत गर्नुभएको छ । यसक्रममा आज उहाँले परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको अवलोकन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई आफ्नो पेशाप्रति इमान्दार बनी सेवा पु¥याउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले सुनेको छु केही स्वास्थ्यकर्मी तलब सरकारी लिन्छन्, काम निजीमा गर्दछन् । अब यो कार्य बन्द हुनुपर्छ ।..
काठमाडौँ, ११ मङ्सिर जाडो याममा घाम कम लाग्ने कारण शरीरले भिटामिन डी कम मात्रामा सोस्न पाउँछ । भिटामिन डीको कमी हुँदा शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न जान्छ । प्रशस्त मात्रामा घाम लागेको बेला शरीरले पर्याप्त मात्रामा भिटामिन डी सोस्न पाउँछ । यसले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउने कारण कलेजो सम्बन्धी विभिन्न रोगहरु लाग्ने खतरा हुन्छ । नियमित शारीरिक अभ्यास गरेको खण्डमा कलेजो सम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा..
काठमाडौँ, ११ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा निरन्तर सुधार भइरहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्स प्लान्ट सेन्टरले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा आज बिहान सेन्टरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उहाँको स्वास्थ्यमा निरन्तर सुधार भइरहेको जनाइएको छ । सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा उत्तमकृष्ण श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री अहिले राम्रोसँग कुराकानी गर्नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको..
काठमाडौं, ११ मंसिर । सरकार र निजी मेडिकल कलेजहरुबीच गए राती २ बुँदे सहमति भएको छ। मंगलबार राती शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको दुई पक्षीय बैठकले २ बुँदे सहमति गरेको जनाइएको छ । नयाँ गरिएको सहमति बमोजिम मेडिकल कलेजहरुले लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ताको प्रक्रिया आज अर्थात् बुधबारबाटै थाल्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । यसअघि मेडिकल कलेजले विद्यार्थीको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अडान दोहोर्याएका..
काठमाडौं, मंसिर ११ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२ वर्षअघि मिर्गाला प्रत्यारोपण गराएका हुन् । तर, सो मिर्गौलाले पनि अब काम गर्न छाडेकाले पुनः मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिले अस्थायी रूपमा उनले डायलाइसिस गराइरहेका छन् । तर, मिर्गौला र प्रधानमन्त्रीलाई अहिले भएको समस्याका बीचमा कुनै साइनो नभएको डाक्टरहरूको भनाइ छ । ‘एपेन्डिसाइटिस वा पेरिटोनाइटिस अचानक जो सुकैलाई पनि हुन सक्छ..
काठमाडौँ, १० मङ्सिर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेखित स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्यो । संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहयोग गछौँ । सबै जानकारी लिएपछि मेरो नीति सार्वजानिक गर्छु ।” स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतका महाशाखा, शाखालगायत निकायका प्रमुखसित आज टेकुमा जानकारी लिने क्रममा..
काठमाडौँ, १० मङ्सिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको एपेन्डिसाइटिसको महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मंगलबार बिहान शल्यक्रिया भएको हो। अहिले हाल उनलाई सेन्टरको सघन उपचार कक्ष (आइसीयू)मा राखिएको छ। ‘सम्भावित जोखिम र संक्रमणप्रति चिकित्सक टोली पूर्णरुपमा सचेत छ। सचेत हुँदै जोखिम न्युनिकरण गर्न हरसम्भव प्रयासरत छ’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य..
काठमाडौँ, १० मङ्सिर स्याउ एकदमै स्वस्थकर खानेकुरा हो । स्याउमा एन्टीअक्सिडेन्ट, फाइबर र फ्लेभोनोइड प्रशस्त पाइनछन् । यसमा भएको फाइटोन्युट्रिएन्टले धेरैथरी फाइदा गर्छ । स्याउमा धेरै पानी र फाइबर हुन्छ । त्यसैले यसलाई पूर्ण आहार बनाउँछ । अझ यसमा भएका प्राकृतिक कम्पाउन्डले तौल घटाउन मद्दत गर्छ । स्याउमा सोलुबल फाइबर हुनाले मुटुरोगको सम्भावना घटाइदिन्छ र यसले कोलेस्ट्रोल स्तर पनि घटाउँछ । अझ,..
काठमाडौँ, १० मङ्सिर मस्तिष्क मानव शरीरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो । मस्तिष्कद्वारा नै शरीरका हरेक अंगहरूको नियन्त्रण, नियमन तथा सञ्चालन हुने गर्छ । मानिसलाई बुद्धिमान तथा समझदार प्राणी बनाउने प्रमुख अंग पनि यही मस्तिष्क नै हो । मस्तिष्क मानिसको ‘मेमोरी बैंक’ हो । मस्तिष्कको स्वास्थ्यका लागि हाम्रो दैनिक आहार विहारको ठूलो भूमिका हुन्छ । स्मरणशक्ति बढाउन विभिन्न खाद्य पदार्थ उपयोगी हुन्छन् ।..
रुपन्देही, १० मङ्सिर । तिलोत्तमा नगरपालिकाले गर्भवतीलाई निःशुल्करूपमा क्याल्सियम उपलब्ध गराउने भएको छ । गर्भवती तथा शिशुको पोषणमा सुधार ल्याउन नगर कार्यपालिकाको ७४औँ बैठकले स्वास्थ्य संस्थामार्फत क्याल्सियम निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । गर्भवती भएको तीन महिनादेखि सुत्केरी भएको ४५ दिनसम्म दैनिक एक चक्की क्याल्सियम खानुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । स्वास्थ्यकर्मीले गर्भवतीलाई क्याल्सियम नियमित खान सिफारिश गरे पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क..
काठमाडौ, १० मंसिर । सरकारले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले आजसम्म रकम फिर्ता नगरे कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायत उपस्थित उक्त बैठकले विद्यार्थीबाट बढी लिइएको शुल्क आज अर्थात् मंगलबारसम्म फिर्ता नगरे आवश्यक कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि गत असोज र..
काठमाडौं, ८ मङ्सिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फलोअप उपचारका लागि धापासीस्थित ग्राण्डी अस्पताल पुगेका छन्। अस्पताल स्रोतका अनुसार उनी आइतबार दिउँसो ४ बजे अस्पताल पुगेका हुन्। पछिल्लो समय मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि प्रम ओलीको दुई पटक डायलाइसिस गरिएको थियो। पछिल्लो सयम उनको मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि दुई पटक डायलाइसिस र एक पटक अल्ट्रा फिल्ट्रेसन गरिएको थियो। १२ वर्ष अगाडि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रम ओली..
काठमाडौँ, ८ मङ्सिर मानिसले विभिन्न प्रकारका जीव, वनस्पतिहरु खाएर आफ्नो जीवन गुजारा गर्दै आएका कुरा मानवताको इतिहासमा जिवितै छ । आज पनि संसारका थुप्रै विश्वविद्यालयमा विभिन्न खानेकुरा र त्यसको असरबारे शोध जारी छ । विभिन्न समुदायमा केही खानेकुरा खान रोक लगाइन्छ भने केही समुदायमा ती प्रतिबन्धित खानेकुरा निकै रुचीका साथ खाइन्छ । यी खानेकुराले मानिसको शरीर र मनमा पर्ने असरलाई यसको कारण..
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर बिपी स्मृति सहकारी अस्पताल लिमिटेड वसुन्धराको अध्यक्षमा पुनः डा केदारनरसिंह केसी चयन हुनुभएको छ । अस्पतालको आज सम्पन्न १२औँ वार्षिक साधारणसभाले डा केसीलाई आगामी चार वर्षका लागि पुनः अध्यक्षमा चयन गरेको हो । कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले अस्पतालले आगामी दिनमा न्यूरो, कार्डियो सर्जरी र क्यान्सरको उपचार थाल्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थापनाको १२ वर्षमा अस्पतालले आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्नेदेखि..
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर औषधि रोगबाट बच्न एवं रोग निर्मुल बनाउन औषधि सेवन गरिन्छ । तर, त्यही औषधि गुणस्तरहीन छ भने ? पक्कैपनि हाम्रो स्वास्थ्यमाथि खेलाँची हुनेछ । सामान्य खाद्यपदार्थको गुणवत्ता त कडाइका साथ परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ भने औषधिको गुणवत्तामा आँखा चिम्लनु कति गैर-जिम्मेवार हो ? जानी-जानी कसैको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नु कहाँसम्मको हेलचेक्राई हो ? यस्तै हेलचेक्राई र गैर-जिम्मेवारपूर्ण काम गरिरहेका छन् औषधि..
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर सुकेको जीउभरि चुरोटले पोलेको दाग, तातो पानीले डामेको खाटा, संवेदनशील अङ्गमा घाउका डोब देखिन्छन् । कलेजोले काम गर्न छाडिसकेको छ । बेलाबेलामा पेटमा पानी जमेर निकाल्नुपर्ने अवस्था छ । दयनीय अवस्थामा सडकबाट उद्धार गरिनुभएकी एक महिला अहिले काठमाडौँको वीर अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ । शुरुमा एक महिलाले खाना पकाउने काममा लगाइदिने भनेर उहाँलाई काठमाडौँ ल्याएकी थिइन् । काठमाडौँको होटलले भने..
जाडोमा प्रदूषणको असर, यस्ता छन् कम गर्ने उपाय
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर हिउँदको समयमा हुने बढी सुक्खापनका कारण प्रदूषण बढ्छ र चिसोले समेत समस्या निम्त्याउँछ । सहरी क्षेत्रमा गाडीको अत्यधिक चाप र यसबाट निस्कने फोहोरले मानिसको स्वास्थ्यमा बढी असर गरिरहेको हुन्छ । प्राथमिक समस्या वायुमा हुने प्रदूषणका कारण शुरू–शुरूमा भाइरल इन्फेक्सन, निमोनिया, एलर्जी र रुघाखोकीजस्ता समस्या देखापर्छन् । जसकारण पछिल्लो समय श्वासप्रश्वास र दमका बिरामीको संख्या बढेको पाइन्छ । अधिकांशमा छाती कसिएको..
आँखा तेजिलो बनाउन रायोको साग ! यस्ता छन् औषधीय गुण
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । स्वादका हिसाबले मात्रै नभएर यसको पौष्टिकता र औषधीय गुणले पनि रायो राजा भनिन लायक छ । विभिन्न पौष्टिकताले भरिएको रायोमा निकै सकारात्मक कुराहरु छन् यसका साथै रायोको तरकारी खाँदा यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । यस्ता छन् फाइदाहरु... गर्भवतीलाई लाभ गर्छ : गर्भवती महिलालाई वाकवाकी आउने, टाउको दुख्ने आदि समस्या देखिन्छन् । शरीरमा भिटामिन केको कमीका कारण यस्तो हुनेगर्छ ।..
काठमाडौँ, ५ मङ्सिर सागसब्जीमध्ये रायोलाई राजा मानिन्छ । स्वादका हिसाबले मात्रै नभएर यसको पौष्टिकता र औषधीय गुणले पनि यो राजा भनिन लायक छ । विभिन्न पौष्टिकताले भरिएको रायोमा निकै सकारात्मक कुराहरु छन् यसका साथै रायोको तरकारी खाँदा यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । यस्ता छन् रायो खानुका फाइदाहरु आँखा तेजिलो बनाउँछ रायोको सागमा भिटामिन ए पाइन्छ । जो स्वस्थ आँखाका लागि अपरिहार्य हो । यसले..
नङबाटै थाहा हुन्छ स्वास्थ्य स्थिती, कस्तो छ तपाईको नङ ?
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर नङ छालाको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो । मृत कोशिकाहरूबाट नङ बन्छ । नयाँ कोशिका बनेपछि मृत कोशिका हट्दै जान्छ र नङ बढ्छ । नङमा कुनै विकार वा आकारमा कुनै असामान्यता देखियो भने स्वास्थ्यका विषयमा सचेत भइहाल्नुपर्छ । नङमा आएको परिवर्तनले रोगको संकेत दिन्छ । नङवरिपरिको छाला रातो भएमा संक्रमण त्यसको कारण हुन सक्छ । नङ फाटेको छ भने एग्जिमा, फोक्सोको क्यान्सर,..
मधुमेह घरघरको समस्या, चिकित्सकका अनुसार के खान हुन्छ के खान हुँदैन् ?
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर आजभोलि कम उमेरका मानिसमा पनि मुटुरोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरु लाग्न थालेको छ । जीवनशैली “त्यसका कारणहरू हाम्रै हातमा छन्”, जनस्वास्थ्य विज्ञहरु भन्नुहुन्छ, “हाम्रो जीवनशैलीसँग जोडिएका कुरा छन् । हाम्रो आनाबानी, रहनसहन, खानपानका कुरा, व्यायाम नगर्ने र अर्को ठूलो समस्या तयारी खानेकुरा रहेको हो ।” उहाँका अनुसार जीवनशैलीसँग जोडिएका कुराहरू सबै मधुमेह रोगसँग मात्रै नभई मृत्युको जोखिम निम्त्याउने अरू कारणसँग..
यस्ता छन् जाडोयाममा रातो तरकारी खानुका फाइदा
काठमाडौँ, ३ मङ्सिर संसारभरीका चिकित्सकहरु स्वस्थ रहनका लागि मानिसहरुलाई पर्याप्त मात्रामा तरकारीहरुको सेवन गर्ने सल्लाह दिन्छन् । हरिया तरकारीमा हेमोग्लोबिन, भिटामिन र आइरन पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । त्यसले हाम्रो शरीर स्वास्थ्य र तन्दुरुस्त रहन्छ । ती हरिया तरकारीको पौष्टिकता रातो तरकारी बिना अधुरो मानिन्छ । जाडो मौसममा यदि तपाईं रातो तरकारी र फलफुलको सेवन गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ राम्रो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । धेरै..
सिमकोट, २ मङ्सिर हुम्लाको एउटा विद्यालयमा पहिलोपटक छात्राका लागि स्वाचालित सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने मेसिन जडान गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटस्थित बालमन्दिर माविमा छात्राका लागि सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने मेसिन तथा प्रयोग भएको प्याडलाई नष्ट गर्ने मेसिन जडान भएको हो । गाउँपालिकाले आफ्ना वडामा रहेको सात वटा माध्यामिक विद्यालयमा स्वचालित सेनेटरी प्याडको मेसिन तथा प्रयोग भएका प्याड नष्ट गर्ने मेसिन निःशुल्क सहयोग..
Results 1452: You are at page 14 of 49